चुनावसम्म एमालेको एकल सरकार ! - Bulbul Samachar
चुनावसम्म एमालेको एकल सरकार !
bulbul बुधवार, असार ९ गते 147 views
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली यो विषयमा सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन्। पदमुक्त गरिएका सांसदलाई पुनर्वहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्धको पुनरावलोकन माथिको सुनुवाइ गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुँयालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षी झिकाएर छलफल गर्न आदेश गरेको छ